Ukudilizwa kuvuse usinga lothando lwezamabhizinisi
UNKK Thabile Zimu phakathi nendawo, emi nabanye babasebenzi bakhe. Isithombe : Sithunyelwe
UNKK Thabile Zimu osungule indawo yokucwala izinwele emuva kokuphelelwa wumsebenzi
UNkk Thabile Zimu (45) waseNewcastle ozinze eThekwini ngenxa yomsebenzi, ovule ibhizinisi lokucwala izinwele iHead Up ngenyanga edlule, uthe akazange adideke ngokuthi yini azoyenza emuva kokudilizwa enkampanini abesebenza kuyo.
Uthe ukuphela komsebenzi yikho okumenze wazinika isikhathi sokubuyela ebhizinisini njengoba aqala ngokuba netafula lokwenza izinzipho eminyakeni eyedlule.
“Njengoba ngiwumuntu ojwayele ukwenza ikhanda endaweni yokucwala izinwele, bengifike ngibone izinto ezishodayo ezindaweni ebengenza kuzo izinwele. Lezi zinto bezenza amakhasimende ngiwabone engagculiseki. Ngibe sengisebenzisa imali engiyithole emsebenzini ukuvula indawo yami,” kusho uNkk Zimu.
Eqhuba uNkk Zimu oneziqu zeBachelor of Social Science, azithola eNyuvesi yaKwaZulu-Natal, uthe itafula aqala ngalo yilona elamvulela indlela njengoba lalimsiza ekutheni akwazi ukubhekana nezindleko zasesikoleni nezidingo zasekhaya.
“Njengamanje ngenza ezeMBA eMancosa ngoba ngifuna ukuzithuthukisa kwezamabhizinisi futhi ngingumuntu ozifelayo ngokufunda. Ukube angiqhamuki emndenini ontulayo ngabe ngikude kakhulu kwezemfundo.”
Uthe akuthandayo ngomkhakha webhizinisi akulo, wukuthi lineqhaza elikhulu ekubuyiseni ukuzethemba komuntu wesifazane.
Ukuzinakekela ekhanda uthe kukhombisa ukuzithanda njengomuntu wesifazane.
Echaza ngezingqinamba abhekane nazo eqala ibhizinisi, uthe kuke kwaba nzima ukuthola amakhasimende njengoba elisungule ngesikhathi esibi abantu bengakakhululwa ukuyocwala izinwele.
“Bayisishiyagalombili abasebenzi enginabo okwamanje kodwa ngizimisele ngokuqhubeka nokuwavula amathuba omsebenzi ngokuhamba kwesikhathi.”
Singenza okuningi uma sinososeshini wabalimi - usomabhizinisi
AmaZulu aphisane ngamaphuzu kowomkhaya
IChiefs inombele ngeSwallows yahlala emhlane kwi’Downs
Kuphinde kwabheda kwiStellies igotshwa iRoyal AM
Ukhala ezimathonsi unina wosana oluthunjiwe
’Sizozinqanda zingakaqali nokuqala izibhelu’